Halkee ayaa ah kuwa isticmaala gvSIG - Geofumadas
Aaway users of gvSIG
Mee, 2012 GvSIG, Internet iyo Blogs
Maalmahan waxaa la bixiya doonaa lagacna a in badan oo ku saabsan mashruuca gvSIG bartaan. Inkasta oo hal dhibic ka xoog of this waa suuqa Portuguese-ka hadlayay sida loo sameeyo in qaab dhismeedka of dhacdo MundoGEO ah, gaari ka baxsan gaari karin sidaas darteed waxaan qaatay fursad si ay u falanqeeyaan qaar ka mid ah tirooyinka ku qoran aan waayo-aragnimo ku biiray.
GvSIG uu noqday ugu System Information Geographic baahsan ee afhayeenka macnaha Hispanic iyo suurto gal mashruuca istaraatijiyad caalami ah oo dagaal badan oo doonaya jiritaanka badan oo bulshada halkii ay xayaysiinta. Inkastoo la a si cad u mudnaan sida qalab GIS desktop, 100,000 isla version downloads waa qadar oo xiiso leh users ka yimid wadamada 90 iyo kuwa kala afka turjumaad 25. iman kara weyn Its waa in ay ka laabataa sida macmiilka khafiif ah astaanta Data kaabayaasha dhaqaalaha (SDIs) in buuxsan kartaa mashaariicda in macrifada iman kara qalabka kale Source Open.
Waxaan ka hadlay dhowr jeer waqtigan, sidaas darteed waxaan soo jeedinayaa gvSIG mawduuc hoosaad, haddaba bal aynu eegno meesha ay isticmaalayaashu yihiin, iyaga oo isticmaalaya tani iminka 2,400 ku saabsan oo aan ku helay Geofumadas bilihii ugu dambeeyey, halkaas oo erayga gvSIG lagu daro erayo muhiim ah.
Jaantusku wuxuu muujinayaa wadamada wadatashi ee ay ka yimaadeen. Sababaha qaar ayaan dhibaato ku qabaa oo ay ku jiraan Spain sababo xariif ah astaamaha, sidaas darteed ha u maleyneynin inay aad u fudud tahay in lagu dhajiyo garaaf ahaan sida tan boosteejada blog, oo leh HTML5; marka jadwalka la soo gudbiyo, waxaa lagu muujiyay Heerka, kaas oo la sharxi doono kadib.
At jaleecada hore aad ka arki kartaa sida ay u faafay gvSIG Latin America iyo Spain, laakiin sidoo kale u timaadeen inaad aragtaan su'aalo ka yimid wadamada Yurub iyo qaaradaha kale ee ilaa iyo haatan u kexeeyey oo mashaariic gvSIG inkastoo in ay jiraan aadan ku hadlin Spain in uu yahay bartilmaameedka ah egeomates.
Miyir qabka kuwa gvSIG
Haatan waxan aragnaa garaafkan kale, halkaasoo aad ka arki kartid meelaynta gvSIG-ga. Tani waxaan u tixgeliyey tirada raadinta laakiin waxaan abuuray saamiga isbarbardhigga ee malaayiin kasta oo internetka ah ee waddan kasta uu leeyahay (ma deggen yihiin). Casaanku waa saamiga, buluuga ah ee raadinta tirada baaritaanka 2,400.
Interesting, Spain waxaa ku xiga Uruguay, Paraguay, Honduras iyo Bolivia.
Kadibna barta labaad ee El Salvador, Ecuador, Costa Rica iyo Venezuela.
Ka dibna Panama, Dominican Republic, Chile iyo Argentina.
Mid kastaa wuxuu samayn karaa gunaanadkiisa, laakiin runta ayaa ah in booska ugu fiican uu ka dhaco dalalka leh kheyraad dhaqaale oo yar, in kastoo la'aanta helitaanka internetka uu keeno buuq ah kordhiya saamiga. Tani waxay badanaa ka badan tahay cad, laakiin sidoo kale waa dhiirrigelin tan iyo kuwan waa waddamada lagu soo bandhigay Heerarka sare ee burcad-badeednimada. Halkaasoo jiritaanka joogitaanka shirkadda GIS ay leedahay shirkado waaweyn oo yar; sida aan ku aragno Peru, Argentina iyo Chile inkasta oo bulshooyinka firfircoon ee isticmaaleyaasha GvSIG, ay leeyihiin shirkado ka shaqeeya mashaariic adag oo cadaadinaya si ay u hirgeliyaan mashaariic aan furanayn, Esri inta badan.
Halka ay jiraan dad badan oo isticmaala gvSIG
Ugu dambeynna fiiri sawirkaan. Tani waa halka dadka isticmaala gvSIG ay ku nool yihiin waddan, adigoo isticmaalaya saamiga boqolleyda ah ee isku mid ah booqashooyinka gvSIG u isticmaala erayga muhiimka ah.
Kala badh dadka isticmaala waxay ku sugan yihiin Spain, halkaa oo aaney ahayn qalabka kaliya ee lacag la'aan ah, dejinta shirkadaha bixiya tababarka, jaamacadaha iyo bulshooyinka isticmaalaha ayaa u qalma dib-u-eegid gaar ah.
Kadib waxaa jira 25% oo ay ku jiraan Argentina, Mexico, Colombia iyo Venezuela; Marka laga reebo wadamo badan oo malaayiin ah oo isticmaala internetka, bulshooyinka isticmaala gvSIG ayaa sidoo kale ka qaybqaatay Foundation, gaar ahaan Venezuela iyo Argentina.
Ka dib markii Chile, Peru, Ecuador iyo Uruguay ay isku daraan 10 kale.
Waa cadahay in tani ay tahay falanqaynta dadka isticmaala Hispanic, tan iyo markii 98% ee taraafikada Geofumadas uu yahay af Isbaanish. Goobaha kale ee la hubiyo waxay buuxinayaan talyaaniga, Faransiiska iyo wadooyinka kale ee yurubiyaanka ah kuwaas oo sidoo kale sii kordhaya sababtoo ah u dhawaanta iyo bulshooyinka isticmaalaha. Ilaa iyo inta qalabkan la faafiyo oo ay ku habboon yihiin bulshooyinka iyo hay'adaha xooggan, aasaasku wuxuu yeelan doonaa nasasho ka timaado welwelada guud ee nagu dhibaateeya dhamaanteen, sida:
Intee in le'eg ayey suurtagal tahay in dhibaatada Europe ay saameyn karto ilaha dhaqaale ee wali mashquuliya mashruuca?
Dabcan, difaaca ugu fiican ee gvSIG waa inuu ahaadaa kuwa isticmaala xoriyadda ku saleysan tartan siman oo joogto ah. Nor waa in aynu iloobin saamiga kibirka in aan (inkastoo shaqsi khilaafka aynu), caalami ee qalab ku dhashay of our macnaha Hispanic noo keeno waa ku qanacsanaanta.
Si aad u ogaato wax badan oo ku saabsan mashruuca gvSIG, waxaad iskaa u-qori kartaa Webinar-ka kaas oo noqon doona Talaado 22 de Mayo
Post Previous«Previous Nidaamka Meeleynta Caalamiga ah sida mashruuc caddaaladeed oo sayniska ah
Post Next Khariidadaha aan la arki karin, taladayda si aan u akhristoNext »
Jawaabay in 2 "Aaway users of gvSIG"
Taasi waa sax Meel maqaalka lagu xusay.
Waxaan ku sheegi lahaa warka oo noqon doona dadka isticmaala Isbanishka. GvSIG sidoo kale wuxuu leeyahay dadka isticmaala luqadaha kale, tusaale ahaan talyaaniga, hubaal ma geli doono boggaga Isbaanish.
Haddii kale shaqo aad u fiican